» स्तनलाई उचित आकारमा सजाउन चाहनुहुन्छ ? यस्ता छन् ८ तरिका
स्तनलाई उचित आकारमा सजाउन चाहनुहुन्छ ? यस्ता छन् ८ तरिका
एजेन्सी । तपाई सचेत हुँदा हुदै पनि कतिपय तपाईका जीवन शैली र आतदले तपाईको स्तनको स्वास्थमा गम्भीर असर गरेको हुन सक्छ । तपाईको स्तनलाई सदा स्वस्थ र ठूलो आकारमा सजाई राख्न तपाईले तलका विषयमा ध्यान दिनुपर्छः
स्तनमा मासु पलाएमा चासो दिनुहोसः यदि स्तनमा सानो डल्ला वा गाँठो देख्नुभयो भने तत्काल स्तनको एक्सरे गरि रोग भए नभएको पहिचान गर्नुपर्छ । त्यस्तै स्तनबाट रगत वगेको छ भने तत्काल चिकित्सककहाँ जानुपर्छ । यदि तपाई आफ्नो स्तनको आकारदेखि दिक्क हुनुहुन्छ र स्तन प्रत्यारोपण गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने एक पटक राम्रोसँग सोच्नुहोस ।
धेरै होमवर्क दिएको भन्दै विद्यार्थीले काटिदिए शिक्षकको घरको वाईफाई !
संसारको एकमात्र देश, जहाँ कहिल्यै ‘डिभोर्स’ हुँदैन
लभमेकिङका क्रममा किन महिलाले आँखा चिम्लन्छन् ?
मोटाउने रहरले यी महिलाको तौल ७२१ किलो पुगेपछि…